एकता प्रक्रियामा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा एमालेबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिएको टिप्पणी भइरहेको छ । माओवादी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटबारे छलफल नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना बारेमा संचार माध्यममा भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । यस्तै माओवादीले सत्ता संचालमा छलफल नगरि ओलीले एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ । जसका कारण दुई पार्टीबीच दूरी बढेको बताइन्छ ।
माओवादी मन्त्रीहरूले मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बजेट निर्माणमा एकलौटी गरिएको आरोप लगाएका थिए । यस्तै दाहालले सोमबार योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल)को प्रशिक्षण कार्यक्रम र संसदीय दलको बैठकमा पार्टी एकताका र आफ्नाबारेमा भ्रम फैलाइएको बताएका थिए ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको अफिसियल ट्वीट ह्याण्डबाट दाहाल अर्को समीकरण बनाउन लागेको आशयको ट्वीटले माओवादी वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ । उक्त ट्वीटलाई माओवादी नेताहरूले एकता भाँड्न खोजेको आरोप समेत लगाइरहेका छन् । दाहालको अभिव्यक्ति, मन्त्रीका गुनासा र ट्वीट प्रकरणलाई जोडेर कतिपयले दुई पार्टीबीच दूरी बढेको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
यही क्रममा बुधबार ओली र दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्तामा ट्वीट प्रकरण, सञ्चार माध्यममा आएका विषयवस्तुले सृजना गरेका भ्रमका बारेमा छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । छलफल पश्चात वातावरण सहज भएको बताइएको छ । दाहालले ओलीसँग ट्वीट र संचारमाध्यमा आएका विषयमा जिज्ञासा राखेको बताइएको छ । जवाफमा ओलीले गलत मनसाय राखेर ट्वीट नगरिएको जवाफ दिएका छन् । दुई नेताबीच विश्वासको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल भएपनि माओवादी नेताहरू भने ओलीनै एकता चाहादैनन् कि ? भन्ने आशंका व्यक्त गर्छन् । “केही खटपटी भएको देखिन्छ र यसले अविश्वास पैदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री नै एकताको पक्षमा नभएको जस्तो पनि देखिन्छ,” एक माओवादी नेताले भने, “ट्वीट प्रकरण, बजेट बाइपास गरिनु र सञ्चार माध्यममा तथ्य बंग्याएर प्रचार गरिनुले आशंका पैदा गरेको छ ।”
ति नेताले ओलीले एकता नचाहेको हो भने प्रष्टरुपमा भन्नुपर्ने बताए । “एकता नचाहेको भने प्रष्ट भन्नुपर्यो, कार्यकर्ता र जनतालाई भ्रममा राख्न हुँदैन,” उनले भने, “एकताबाट भाग्न खोजेर कसैलाई पनि राजनीतिकरुपमा फाइदा हुँदैन । भएका खटपटी बसेर हल गर्नुपर्छ र चाँडो भन्दा चाँडो एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ ।”
एमालेले भने दूरी बढेको वा असन्तुष्टि रहेको विषयमा औपचारिक जानकारी नभएको बताएको छ । उपाध्यक्ष भीम रावल अन्तुष्टी रहेको विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नरहेको बताउँछन् । “यो विषयमा औपचारिक जानकारी छैन । एकतामा विलम्व भएको छ, यो उचित होइन,” उनले भने, “कुनै विषयमा चित्त नबुझेको भए बसेर हल गर्न सकिन्छ ।”
एकता प्रक्रियाबाट भाग्ने छुट कसैलाई पनि नभएकाले र जतिसक्दो चाँडो एकता घोषणा गरिनुपर्ने रावल बताउँछन् । एमाले र माओवादीच असोज १७ गते गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने र त्यसलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । निर्वाचनमार्फत बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण भइसकेको अवस्थामा र सहमति भएको सात महिनासम्म एकता घोषणा हुन सकेको छैन । सात महिनासम्म एकीकृत पार्टीको संगठनमा समाहित हुने सदस्य संख्यामा कसका कति ? एकीकृत पार्टीको विधानमा जनयुद्ध शब्द राख्ने या नराख्ने र निर्वाचन चिन्ह सूर्य मात्रै वा सूर्यभित्र हसिया हथौडापनि राख्ने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन । सतहमा यी तीन विषयले एकता घोषणा भएको बताइन्छ । गत बिहीबार ओली र दाहालबीचको छलफलले यी विषयमा सहमति जुनाएको बताइएको थियो । तर दाहालले सोमबार वाइसिएलको कार्यक्रममा यसको खण्डन गरेका छन् ।